Pope Francis na-ekpe ekpere maka 'ịgba akaebe nke ebere', onye ụkọchukwu Katọlik gburu na Italy | Ahụrụ m Jizọs n'anya
di Paolo Tescione - Septemba 17, 2020
"M sonyere ihe mgbu na ekpere nke ndị ezinụlọ ya na obodo Como na, dị ka bishọp ya kwuru, ana m eto Chineke maka akaebe ahụ, ya bụ, n'ihi okwukwe, nke akaebe a nke ọrụ ebere n'ebe ndị dara ogbenye nọ," ka Pope Francis kwuru na ndị na-ege ntị n'ozuzu na September 16.
A maara Malgesini maka nlekọta ya maka ndị na-enweghị ebe obibi na ndị mbata na diocese nke ugwu Italy. Onye nwụrụ na Tuesday n'akụkụ parish ya, ụka San Rocco, otu n'ime ndị mbịambịa o nyeere aka.
Na catechesis nke ndị na-ege ya ntị, Pope Francis kwuru na nrigbu nke okike Chukwu n'ụdị na nrigbu ndị mmadụ gara aka.
"Otu ihe anyị na-agaghị echezọ: ndị na-enweghị ike ịtụgharị uche n'ihe okike na ihe okike enweghị ike ịtụgharị uche mmadụ na ụba ha," ka o kwuru. "Onye ọ bụla nke dị ndụ iji rigbuo ụwa na-erigbu ndị mmadụ ma were ha dị ka ndị ohu".
Pope Francis batara n'oge ndị isi ọhaneze ya nke atọ ịgụnye ọnụnọ nke ndị njem ala nsọ kamgbe mbido ọrịa oria coronavirus.
Ọ gara n'ihu na catechesis ya n'isiokwu na-agwọ ụwa mgbe ọrịa coronavirus na-efe efe, na-atụgharị uche na Jenesis 2:15: "Onyenwe anyị Chineke wee were mmadụ wee mee ka ọ nọrọ n'ogige Iden, ịkọ ya na ilekọta ya."
“N'iji ihe okike mee ihe: nke a bụ mmehie,” ka o kwuru.
Dị ka popu si kwuo, otu ụzọ isi zụlite ezi echiche na ịbịakwute ihe okike bụ "nwetaghachi akụkụ ntụgharị uche".
Ọ kọwara, sị: “Mgbe anyị na-atụgharị uche, anyị na-achọpụta na ndị ọzọ na n'okike ihe karịrị nnọọ ịba uru ha. "Anyị na-achọpụta ịdị mkpa nke ihe ndị Chineke nyere ha."
O kwuru, sị: "Nke a bụ iwu zuru ụwa ọnụ: ọ bụrụ na ị maghị etu esi atụgharị uche n'okike, ọ ga-esiri gị ike ịma otu esi atụgharị uche na ndị mmadụ, ịma mma nke ndị mmadụ, nwanne gị nwoke, nwanne gị nwanyị."
O kwuru na ọtụtụ ndị nkuzi mmụọ kụziri etu ịtụgharị uche n ’igwe, ụwa, oke osimiri na ihe ndị e kere eke nwere ike“ isi mee ka anyị laghachikwute Onye kere anyị ma soro anyị kee ihe. ”
Pope Francis zoro aka na Saint Ignatius nke Loyola, onye, ​​na ngwụcha mmemme ime mmụọ ya, na-akpọ ndị mmadụ oku ka ha mee "ntụgharị uche iji ruo n'ịhụnanya".
Nke a bụ, pope kọwara, “na-atụle otú Chineke si ele ihe ndị o kere eke anya ma soro ha na-a ;ụrị ọ ;ụ; chọpụta ọnụnọ Chineke n'ime ihe ndị o kere eke, yana nnwere onwe na amara, ịhụnanya na nlekọta maka ha ".
Ntụgharị uche na nlekọta bụ omume abụọ na-enyere "aka idozi na imezi mmekọrịta anyị dị ka mmadụ na okike," ka ọ gbakwụnyere.
Ọ kọwara mmekọrịta a dị ka "nke nwanne" n'echiche ihe atụ.
Mmekọrịta a na okike na-enyere anyị aka ịbụ "ndị nche ụlọ, ndị na-echekwa ndụ na ndị nche nche," ka o kwuru. "Anyị ga-echekwa nketa nke Chineke nyefegoro anyị ka ọgbọ ndị dị n'ihu nwee ike ịnụ ụtọ ya."
Elena Gioia ji mma agha nke asaa gbuo nna ya
Emechie onyinye n’elu efere na uka
Aldo Moro nke dị nsọ nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị